Your Uninstaller! 7.4.2012.05 Datecode 03.02.2013 | IT Sharing Network
Software တွေကို အလွယ်တကူ Uninstall လုပ်ဖို့အတွက် Your Uninstaller! 7.4.2012.05 Datecode 03.02.2013 ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... Windows မှာပါတဲ့ Uninstall လုပ်ဆောင်ချက်ထက်ပိုကောင်းပါတယ်.... Windows မှာက Uninstall လုပ်ရာမှာ complete မဖြစ်ပါဘူး broken registry keys များလဲ ကျန်နေတက်ပါသေးတယ်... Software တွေကို ပြန်ဖြုတ်တဲ့အခါ Unistaller တစ်မျိုးမျိုးကို အသုံးပြုတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ... အသေးစိပ်သိလိုလျှင် http://www.ursoftware.com/uninstaller.htm ကို Click ပြီး မူရင်းထုတ်လုပ်တဲ့ ဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Sharebeast မှာတင်ပေးထားပါတယ်....
Uninstaller Your Uninstaller Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook